Trafika-na andramena : VOATERY NANAO TIFI-DANITRA NY FANJAKANA -
AccueilRaharaham-pirenenaTrafika-na andramena : VOATERY NANAO TIFI-DANITRA NY FANJAKANA
Horonan-tsarimihetsika, izay no azo ilazana ny fizotry ny fisamborana ny sambo “Lumina” nitondrana ireo andramena miisa 341 nokasaina haondrana an-tsokosoko. Nanomboka tany Iavoloha ny fanomanana ity hetsika ity araka ny baikon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina araka izao hitaterana azy izao…
Novorian’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny praiminisitra Olivier Mahafaly Solonandrasana, ny minisitry ny Fitaterana Benjamina Ramanantsoa ka tamin’izany no nanomezany toromarika ny lehiben’ny governemanta handray ny fepetra rehetra hisakanana ity fikasana hanondrana andramena ity. Nitohy tany Mahazoarivo ny fivoriana ka tapaka tamin’izany fa hidina any an-toerana ny hery manokana avy amin’ny prezidansa sy ny primatiora.
Nigadona tany Toamasina ny hery manokana avy amin’ny prezidansa sy ny primatiora ary nivantana tao amin’ny APMF. Avy tao no nanarahana ny lalana sy ny toerana nisy ny sambo Lumina nitondra ireo andramena. Nitondra sira milanja 360 T moa ity sambo ity araka ny efa notaterina teto rehefa niala tany Antsiranana, nahintsan’ireo ekipazy tao Vohémar ny 325 T tamin’ireo sira hampidirana ireo andramena. Nanao ny antsoina hoe “bon de partance” ho any Mahajanga ilay sambo kanefa nivily lalana tany Mananara nihazo ny Cap Masoala. Fatantra ihany koa fa nisy sambokely maromaro nanao ny antsoina hoe “bon de partance” kanefa tsy nitondra entana. Azon’ireo mambran’ny hery manokana avy amin’ny prezidansa an-tsaina fa ireto sambokely ireto no ‘ndeha hitatitra ireo andramena ao amin’ny sambo Lumina. Nifampiraharaha tamin’ny tale jeneralin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ireo miaramila avy aty amin’ny prezidansa mba hanome sambo “remorqueur” hanenjehana ny sambo Lumina.
Niainga tao Toamasina ny sambo Noé nitondra ireo iraka manokana avy amin’ny prezidansa ny alatsinainy tamin’ny 1 ora maraina. Voatery nametraka paikady ny mpitarika ity iraka ity ka nanodidina niakatra tany amin’ny 30 Km miala an’i Sainte-Marie mba tsy hisy hahatsikaritra. Nipaika ny tamin’ny 2 ora tolakandro vao nahatazana ny sambo Lumina izy ireo. Nantsoin’ny komandan’ny sambo Noé ny komandan’ny sambo Lumina mba hijanona fa hisy fisavana atao. Nandray ny antso ity komandà ity tamin’ny voalohany saingy noho ny fantany fa manam-pahefana hisava ny sambo entiny dia tsy noraisiny intsony ny radio sady nandositra tsy nety nijanona izy ireo. Voatery nanapoaka basy ireto iraka manokana avy amin’ny prezidansa ireto hanerena ny komandan’ny sambo Lumina hijanona. Nisitrika tany anaty lakavy avokoa anefa ireo ekipazy ka nataon’izy ireo “pilotage automatique”. Farany, voatery nadona tamin’ny sambo Lumina ny sambo Noé nitondra ireo iraka mba nahafahan’ireo miaramila nihanika ity sambo nitondra andramena ity. Sarona nanomboka teo ny trafika. Folo no isan’ireo ekipazy niampy olona roa ka ny iray tamin’izy ireo no irakiraky ny tompon’ny sambo, ny faharoa kosa irakiraky ny tompon’ny entana. Teo amin’ny 30 Km miala amin’ny Cap Masoala no nahatratrarana ny sambo Lumina, naharitra ora roa ny fifanjevoana
Nandray fanapahan-kevitra nihazo an’i Sainte-Marie niaraka tamin’ny sambo Lumina ireo iraka avy amin’ny prezidansa tokony ho tamin’ny 4 ora tolakandro ny andron’io 06 Febroary io ka nigadona tany izy ireo tokony ho tamin’ny 01 ora maraina ny talata 07 Febroary. Efa niandry tao Sainte-Marie ny komandin’ny Zandarimaria sy ny kaomisera lehiben’ny PAF izay nisolo tena ny DGPN.
Nentina nihazo an’i Toamasina ny sambo Lumina ny zoma lasa teo, tokony ho tamin’ny 07h 30mn no nigadonany tao. Tonga tany an-toerana ihany koa ny praiminisitra Olivier Mahafaly Solonandrasana, ny minisitry ny Fitsarana, ny minisitry ny Foloalindahy ary ny SEG. Nanome ny toromarika rehetra araka ny baikon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny praiminisitra sady nanao fanambarana hentitra manoloana izao toe-draharaha izao.
Nentina niakatra atao fanadihadiana eto an-drenivohitra ireo olona 12 tao anatin’ilay sambo ka valo amin’izy ireo notanana etsy Fiadanana, ny efatra kosa ao amin’ny Toby Ratsimandrava. Miandry ny tohin’ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana ny mpanara-baovao, ny praiminisitra rahateo moa efa nampanantena fa ao anatin’ny mangarahara tanteraka ka ho hita eo avokoa izay rehetra niray petsapetsa tamin’ity fanondranana andramena ity.